Republic nke Congo na-emegheghachi maka ndị njem mba ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Republic nke Congo na-emegheghachi maka ndị njem mba ụwa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ kacha ọhụrụ na DR Congo • News • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Republic nke Congo gagharịrị ọzọ
The Republic nke Congo emegheheala ókèala na ọdụ ụgbọ elu ndị ọbịa mba ụwa. Iji gaa Congo, ndị njem ga-eme nyocha ahụike ma soro usoro iwu iche.
All ọbịa na-chọrọ iji wuchaa a na-adịghị mma Covid-19 ule n'ime ihe karịrị ụbọchị 7 tupu ịbata ma nyefee nsonaazụ ule ahụ n'ime ụbọchị 2 nke ọpụpụ maka Congo.
A ga-achọ ka ndị njem niile rutere ka ha gabiga ahụ ahụ ma nwee ike ịrịọ ka ha mee nyocha ọzọ COVID-19.
Foreignlọ Ọrụ Mba Ọzọ, Commonwealth & Development (FCDO) nke UK na-adụ ọdụ megide njem niile n'ime kilomita 50 nke ókèala na Central African Republic na mpaghara Likouala. FCDO na-adụ ọdụ megide njem niile dị mkpa na mpaghara Boko, Kindamba, Kinkala, Mayama na Mindouli nke mpaghara Pool, yana mpaghara Mouyondzi nke mpaghara Bouenza.
Dabere na FCDO, a ga-etinye ndị njem niile na-abanye Republic of Congo n'ime mkpuchi ụbọchị iri na anọ n'ụlọ ọrụ gọọmentị na-agba ọsọ.
E nweghị ugbu a track na Chọpụta chọrọ maka mbata. Mgbe ha lara, ndị njem na-ahapụ Republic of Congo nwere ike ịnọ na nyocha, gụnyere nyocha ọnọdụ okpomọkụ. Nlekọta ahụike ọha na eze na ihe ndenye chọrọ nwere ike ịgbanwe na obere oge ma ekwesiri iji nyochaa site na mgbasa ozi mpaghara maka mmemme ọhụụ.
Ndị ọbịa ga-enwerịrị visa tupu njem, na paspọtụ kwesịrị ịdị irè maka oge a chọrọ ị nọrọ. Enweghị oge ọzọ maka nkwado karịrị nke a chọrọ. Nationalmụ amaala nke Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Cote d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Mauritania, Morocco, Niger, Senegal na Togo nwere ike ịnweta visa mgbe ha rutere. Mba ndị ọzọ niile ga-etinye akwụkwọ maka visa tupu ha agaa.
Maka ndị njem visa, ndị njem ga-enweta akwụkwọ ịkpọ oku site na Congo wee bipụta ma were nke ahụ nke tiketi ụgbọ elu gaa na Republic of Congo kacha nso, yana oge nhazi nke ụbọchị 3 maka $ 100.
Lelee ma achọrọ akwụkwọ ịba edo edo tupu ịga nleta.
FCDO na-ekwu na ozi a dị ugbu a dị ka nke September 14, 2020.